Blush Box Glowing + Multicolour 020 | CATRICE COSMETICS
Blush Box Glowing + Multicolour 020
အရောင်များစွာရှိသော ပေါင်ဒါ type ပါးနီလေးဖြစ်ပါသည်။
လနျးဆနျးနတေဲ့ နှငျးဆီသှေးရောငျ အလှအပတှဲဖကျလေးကို ရှာဖှနေပေါသလား? Multi-colour, ပေါငျဒါပါးနီလေးက မကျြနှာကို လှပပွီး တညျငွိမျတဲ့ အပွောငျလေးနှငျ့ ပုံဖျောဆောငျပေးမှာပါ။ Apple cheeckလိုချေါတဲ့ ပါးအို့လေးပျေါမှာ ပေါငျဒါ bursh သို့မဟုတျ ပါးနီ brushလေးနှငျ့ ပုံမှနျလေး လိမျးခွယျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ နားထငျဘကျခွမျးကို အသာလေး blendလုပျသှားပေးပါ။ ကှဲပွားတဲ့အရောငျသုံးရောငျ ရရှိနိုငျပွီး စိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးတဲ့ ပတျတနျလေးနှငျ့ ၂ရောငျစီ အသီးသီးပေါငျးစပျထားပါတယျ။ Shimmerအပွောငျလေးတှကေ ပါးမို့လေးတှအေတှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အလှအပပစ်စညျးလေး တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
လန်းဆန်းနေတဲ့ နှင်းဆီသွေးရောင် အလှအပတွဲဖက်လေးကို ရှာဖွေနေပါသလား? Multi-colour, ပေါင်ဒါပါးနီလေးက မျက်နှာကို လှပပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အပြောင်လေးနှင့် ပုံဖော်ဆောင်ပေးမှာပါ။ Apple cheeckလိုခေါ်တဲ့ ပါးအို့လေးပေါ်မှာ ပေါင်ဒါ bursh သို့မဟုတ် ပါးနီ brushလေးနှင့် ပုံမှန်လေး လိမ်းခြယ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ နားထင်ဘက်ခြမ်းကို အသာလေး blendလုပ်သွားပေးပါ။ ကွဲပြားတဲ့အရောင်သုံးရောင် ရရှိနိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ပတ်တန်လေးနှင့် ၂ရောင်စီ အသီးသီးပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ Shimmerအပြောင်လေးတွေက ပါးမို့လေးတွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှအပပစ္စည်းလေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။